नेपाली क्रिकेटको भविश्य डिभिजन टु ले तय गर्ने, यस्तो छ कारण !! – Vision Khabar
नेपाली क्रिकेटको भविश्य डिभिजन टु ले तय गर्ने, यस्तो छ कारण !!
। २६ पुष २०७४, बुधबार १३:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अर्को महिना नामिबियामा हुने विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन टूका लागि नेपाली टोलीले तयार सुरु गरेको छ ।
यो नेपालका लागि एकदिवसीय विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना पूरा गर्ने अन्तिम बाटो मात्र होइन, नेपाली क्रिकेटको भविश्यसँग पनि जोडिएको छ ।
डिभिजन-टू मा राम्रो गर्न सकिएन भने ?
पुवुदु दशानायकेले छाडेपछि टमाटाले प्रशिक्षको भूमिका निभाउँदै आएका छन् । क्रिकेट संघ निलम्बनमा रहेकाले खेलाडी छनोटमा पनि प्रशिक्षक र कप्तान पारस खड्का नै निर्णायक छन् ।
उनकाअनुसार डिभिवन वानमा रहेकाले मात्र आईसीसीले क्रिकेट संघ निलम्बन रहेका बेला पनि लगानी गरिरहेको छ ।
डिभिजन टू लगतै आईसीसीको बैठक बस्नेछ, जसले नेपाली क्रिकेटबारे निर्णय लिने अनुमान गरिएको छ ।
निर्वाचित क्यानको विशेष साधारणसभाले सल्लाहकार समूहमा भएको सहमति भन्दा केही फरक प्रावधान राखेर विधान अनुमोदन गरेकोमा आईसीसी सन्तुष्ट छैन । आईसीसीले डिसेम्बर २२ सम्म लिखित जवाफ पठाउन भन्यो र क्रिकेट संघले आफ्नो दाबीसहित जवाफ पनि पठाएको छ ।
आईसीसीको टोली छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउन र सम्वद्ध पक्षसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
भ्रमण टोलीले आईसीसीको साधारणसभामा नेपालसम्वन्धी प्रस्ताव पेश गर्नेछ । यो बैठकले नेपालको सदस्यता खारेज वा निलम्बन फुकुवा कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ । कतिपयले भने डिभिजन टूमा नेपालको प्रदर्शनमा पनि यो भर पर्ने बताउने गरेका छन् ।